Banijya News | कर्पोरेट - Banijya News कर्पोरेट - Banijya News
नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी एक डलरको खरिद दर १२३ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्री दर १२४ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ । जस अनुसार लगातार रुपमा अमेरिकी डलरको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । डलर महँगो हुनुको अर्थ नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुनु हो ।…
सेयर बजारमा १५.८२ अंकको गिरावट, कारोवार रकम पनि घट्यो
सेयर बजारमा १५.८२ अंकको गिरावट आएको छ । शुक्रबार परिसूचक १५.८२ अंकले घट्दा २२३५.०९ को विन्दुमा ओर्लिएको छ । यस्तै, कारोबार रकम ९३ करोड रुपैयाँमा सिमित छ । यो करिब दुई वर्ष यताकै कम कारोबार रकम हो । अघिल्ला दिनहरुमा शुक्रबार कारोबार खुल्ने गरेको थिएन । तर, सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय…
बढ्यो सुन र चाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोवार ?
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य शुक्रबार तोलामा १ हजार रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला १ हजार रुपैयाँले बढेर ९७ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, तेजावी सुनको मूल्य तोलाको ९६ हजार ८०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । बिहीबार छापावाल सुन तोलाको ९६ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार…
नबिल र एनबि बैंक मर्जर रोक्न परेको मुद्दा फिर्ता, मर्जर अघि बढ्ने
नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबि) बैंकबीचको मर्जर रोक्न परेको रिट निवेदकले फिर्ता लिएका छन् । एकल इजलासले तत्काल मर्जर अगाडि नबढाउन दिएको आदेश संयुक्त इजलासमा पुगेपछि रिट फिर्ता भएको हो । बिहीबारका लागि न्यायाधिसहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मलता...
वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंले आज (शुक्रबार)देखि अनलाइनबाटै नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवा अनलाइनबाट प्रवाह गर्ने उद्देश्यअनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट दिन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले २०७८ माघ २ गतेदेखि पुनः श्रम...
विजय जुलुस मनाएर घर फर्किएका वडा सदस्यको निधन
सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–५ का नवनिर्वाचित वडा सदस्य ६९ वर्षीय राजेन्द्र सुतिहारको निधन भएको छ । सुतिहार सुतेकै अवस्थामा शुक्रबार बिहान मृत फेला परेको वडाध्यक्ष देवेन्द्र साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि सुतिहार बिहीबार विजय जुलुस मनाएर घर...
प्रधानसेनापतिले गरे बेलिब्रिजको उद्घाटन
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले गोरखा जिल्लास्थित बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजना अन्तर्गत माछा खोलामा नवनिर्मित बेलीबृजको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा रक्षा सचिव किरण राज शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सडक विभागका निमित्त महानिर्देशक शिव प्रसाद नेपाल, उप...
इसेवाले ‘बीमाशुल्क भुक्तानी गरिन्छ, लखपति बनिन्छ’ योजना ल्याएको छ । इसेवाले बीमितहरुले घरमै बसेर बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने उदेश्यले यो योजना सार्बजनिक गरेको हो । यो योजना भदौ ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिईएको छ । यस...
एनएमबि बैंकद्वारा माईती नेपालका दिदिबहिनीहरुलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा माईती नेपालका ५३ जना दिदिबहिनीहरुको उपस्थिति रहेको जानकारी दिईएको छ । बैंकको लघुवित्त बिभाग द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा उपस्थित दिदिबहिनीहरुलाई उत्प्रेरणा दिंदै बचत, लगानी, बिभिन्न प्रकारका कर्जाहरु...
प्रभु बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपबीच संझौता
प्रभु बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिबीच आकर्षक छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेल र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद न्यौपानेले उक्त सम्झौतामा...
Page 1 of 6831234Next ›Last »